IINDIDI ZOMGANGATHO WEKHITSHI (EZONA ZINGCONO ZOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iindidi zoMgangatho weKhitshi (Ezona ziNgcono zoyilo)
Iindidi zoMgangatho weKhitshi (Ezona ziNgcono zoyilo)
Wamkelekile kwigalari yethu yeentlobo ezifanelekileyo zekhitshi apho sixoxa khona ngezinto ezinje ngethayile, ukhuni, i-linoleum, ivinyl kunye nekhonkrithi.
Amakhitshi yenye yezona ndawo zilungisiweyo ekhaya. Kuzo zonke izinto eziphuculweyo ekhaya umntu anokwenza imodem evuyisayo yekhitshi angabuyisa isixa semali xa usiya kuthengisa ikhaya. Ngapha koko, kubathengi abaninzi basekhaya amakhitshi ahlaziyiweyo aya kwenza okanye aphule isigqibo sabo sokuthenga. Enye yeendlela onokuthi uhlaziye ikhitshi ngaphandle kokophula i-bank ngohlobo lwekhitshi olifaka phantsi.
Amakhitshi yindawo eyaziwayo yokuqokelela kunye nokutya. Ikhitshi liya kufumana ukugcwala kweenyawo ezininzi njengoko ligumbi wonke umntu osapho aya kutyelela ubuncinci kanye ngemini ukuba akukho maxesha amaninzi kulo lonke usuku. Oku kuthetha ukuba i-flooring ekhethiweyo ibaluleke kakhulu hayi ngokubonakalayo nangokubhaliweyo kuphela, kodwa nakwindawo yokuzinza kunye nokuqina.
Izinketho zoMgangatho weKhitshi
Umgangatho weTile yePorcelain
Ngumthi wokhuni oluqinileyo
Ezinye iintlobo zoMgangatho weKhitshi
Umgangatho oPhambili weKhitshi
Eyona ndawo yokuthenga iKhitshi loMgangatho kwi-Intanethi
Xa kuziwa kumgangatho wekhitshi useto ngalunye luya kuba neemfuno zalo kunye neemfuno zalo. Ukucinga ukuba loluphi uhlobo lwabantu oluza kusebenzisa le ndawo kunye nenani lokusetyenziswa kwekhitshi elizakufumana zizinto ekufuneka ziqwalaselwe. Amakhitshi anokuqulatha ukufuma okuninzi, kwaye lo ngumba ophambili ekufuneka ujongiwe xa ukhetha i-flooring kulo naliphi na igumbi, ngakumbi ikhitshi.
Qaphela ukuba akukho mgangatho ugcobileyo kwinto nganye oya kuba nakho ukulunga kunye nokubi. Olunye ukhetho olwahlukileyo kunye nobuchule babo kunye neengozi zezi zilandelayo.
Ngelixa ucinga ukuba unciphise ukhetho xa ukhetha ukuhamba ngethayile, kusekho ukhetho oluninzi lweetayile onokukhetha kuzo. Njengenye yeemveliso ezifunwa ngakumbi kumgangatho wasekhitshini, bayenzile ukuze ingene ngokukuko nangayiphi na into yoyilo kunye nesitayile. Olunye ukhetho lweethayile lungezantsi, kodwa gcina engqondweni ukuba ujonga into ethile, kukho EZININZI ezininzi!
Iithayile zeceramic yenye yezona zisetyenziswa kakhulu xa kufikwa kwiindidi zekhitshi. Kuthethwe ngaphambili yenye yezona zinto ziphambili ebesizifuna kukuzinza, kwaye kulapho iithayile zeceramic zikhanya ngokwenene!
Iithayile zekheram aziyi kuqhekeka xa iipleyiti, iikomityi zeglasi, iimbiza, okanye ezinye izinto eziqhelekileyo zekhitshi zisiwa. Qaphela ukuba nditshilo ukuba ngekhe yaphule, kuhlala kukho ithuba lokuba izakutshintsha okanye yaphule. I-Ceramic ihlala ikhethelwa inkangeleko yayo entle kwaye ukuba yonakaliswe yi-chip enkulu okanye kukuqhekeka, ngethamsanqa kuthi kuyakuba lula ukulungisa. Ngeethayile zeceramic kuya kufuneka kuphela ukuba ubuyisele ithayile eyaphukileyo, endaweni yokwenza kwakhona wonke umgangatho.
amazwi amnandi kwintombi yakho
Enye into ebikhankanyiwe ngaphambili kukuba kuhlala kukho amanzi kunye nokufuma ekhitshini. Kukho ukhetho lokugaya kwiithayile zeceramic eziya kuthi zibonelele ngokuxhathisa ukufuma iithayile eziya kuba nakho kuseto lwekhitshi.
Kukho uluhlu olukhulu lweetayile zeceramic ezikhoyo kumgangatho wasekhitshini. Unokufumana iithayile ezinoyilo lwangoku, lwesiko okanye lwe-rustic ukufumana eyona nkangeleko yakho uyilandelayo. Kukho neplani ejonge iithayile zekheram ezinokukunika isitayile somgangatho okhuni ngaphandle kwayo yonke imiba yokugcinwa efunekayo enxulumene neenkuni zokwenyani.
Ngelixa uluhlu lwezinto ezintle lubaluleke kakhulu kwaye lubaluleke kakhulu kulo msebenzi, kukho izinto ezimbalwa xa kufikwa kwiithayile zeceramic. Iithayile zeCeramic zinzima kwaye zinzima. Oku kulindelwe ngokomelela ebinako kodwa kuya kuthetha ukuba abakulungelanga kakhulu ukuma kumaxesha amade. Oku kungadityaniswa neepets ezithambileyo ezifuna ukubeka uxinzelelo emzimbeni xa umi kwiindawo ezilukhuni.
Ngokubhekisele kubunzima, oku kuyingxaki yokwenyani ukuba ikhitshi alikho kwibali elisezantsi. Kwiimeko ezininzi oku akunjalo, ke akufuneki kubangele inkxalabo ngaphandle kokuba unekhitshi elinamabali aphezulu, kwaye kwimeko enjalo kuya kufuneka uqiniseke ukuba ulwakhiwo lunokuxhasa olo hlobo lobunzima.
yimalini ekufuneka uyisebenzise kumsesane womtshato
Ukuba uphetshethwe ziithayile zeceramic, linda ndide ndikuxelele malunga nento esiye sayifumana ngokulandelayo. Ithayile ye-Porcelain ifana nokutshintshela kweso sithethi sibizayo ocinga ukuba ngekhe senze mahluko, kodwa eneneni yeyona nto intle owakha wayithenga. Iithayile ze-Porcelain zithatha into eyomeleleyo kwaye ziyiphathe. Ezi tile zihlala zomelele kangangokuba zihlala zisetyenziswa kuseto lwentengiso, oko kuthetha ukuba kwikhaya lakho akusayi kubakho zinkxalabo. Ayisiyiyo iprojekti enkulu kuphela, kodwa kukho iArhente yokuQinisekiswa kweTile yePorcelain eya kuqinisekisa ukuba zonke iithayile ze-porcelain zinenqanaba lokufunxwa .5%.
Zonke ezi mpawu zinokwenza ubomi obude kakhulu bemveliso. Ngokwesiqhelo ukuba ufuna umgangatho ukugqiba amashumi eminyaka kuya kufuneka ubeke ulondolozo oluninzi kuwo ngokuhamba kwexesha, kodwa i-porcelain ifuna kuphela ukutshayelwa kunye nokukhanya okulula ngamanye amaxesha.
Ngelishwa yonke into elungileyo ineengxaki. Ifana neceramic Porcelain iya kuba nzima kakhulu. Oku kuthetha ukuba akunconywa kwizicelo zamabali aphezulu kwaye kuhlala kungenakho ukwenziwa ngaphandle kofakelo lobungcali. I-Porcelain iya kubiza ngaphezulu kuneethayile zeceramic, kwaye ngenxa yobunzima bokufakwa kuya kubiza imali encinci ngokunjalo.
Ezinye iithayile lilitye leNdalo eliya kuthi lenze ukuba lahluke ngokugqibeleleyo kwaye ngokwesiqhelo linobuhlobo kwindalo esingqongileyo. Ezinye zeendlela ezithandwayo zezi zilandelayo:
I-Travertine isandula ukuba yenye yeendidi ezithandwayo zekhitshi. Oku kungenxa yezinto zendalo ezinikezela nge-rustic kunye ne-vibe efihlakeleyo, ingoyisi indawo kwaye ibe ziitoni zomhlaba ezilula ukuzidibanisa. I-Travertine yinto yelitye le-limestone eya kuthi ifike kwi-beige, browns, tans, kunye neminye imibala yendalo.
Le nto ithathwa njengephezulu ngenxa yomgangatho wendalo owenza isiqwenga ngasinye sethayile sahluke kwiipateni nakwiinkozo. Njengezinto zokugqibela eziphezulu zihlala ixesha elide, ezinokubakho ubomi bonke, ukuba zigcinwe ngokufanelekileyo. Ngelishwa, ulondolozo ayisiyiyo nje ukutshayela kunye nokukorobha.
Ukuyinyamekela ngokufanelekileyo i-travertine flooring kuyakufuneka itywinwe rhoqo ukuthintela nakuphi na ukufuma okungena kumgangatho, ngakumbi kwindawo efana nekhitshi apho ukuchitheka kunye nedriphu zixhaphakile. I-travertine iya kusetyenziswa kwifomu yayo yelitye eliya kuthetha ukuba inokuphinda isebenze kwakhona kwaye ibenokuboliswa yintsholongwane, iyenze ibe nobubele kakhulu.
Umgangatho wegranite yinto etofotofo eya kuthi ikhangeleke kakuhle ekhitshini. Amanqanaba okuphuhla kwezi zinto ahamba eluphahleni kwaye zininzi izinto onokukhetha kuzo xa ubandakanya igranite.
I-Granite yayihlala inepateni yendalo, kodwa inokwahluka ngemibala kwaye inokuqaqamba ngepolishi. Ngoku ngenxa yokuba into intle ayithethi ukuba inokwenza, kodwa kwimeko yegranites yeyona ilungileyo kuzo zombini ihlabathi. I-Granite iya kubamba ifuthe kwaye ihlale igcwele ukugcwala kwabantu kwikhitshi elisetyenzisiweyo. Ayisiyontle kuphela kwaye yomelele kodwa ikwangumelana namabala.
Zonke izinto ezilungileyo kufuneka ziye esiphelweni nangona kunjalo, ezantsi ezantsi ukuya kwigranite ziyabiza ixabiso lomgangatho kunye nokutyibilika, ngakumbi xa upholishiwe. Izinto ezinje ngeerugs kunye nokufaka ipolishi encinci kunokunceda ekulweni ezo ngxaki.
Imarble kunye negranite zinje ngoodade, babelana ngeempawu ezifanayo. Umgangatho weMarble ibonelela ngobuhle kunye nobunkunkqele kumakhaya, kuba yinto ephambili yokunethezeka ngelixa usenakho ukwenza. IMarble ayinamanzi, kodwa njengegranite, inokuba ngumtyibilizi. Imarble, njengegranite, iyafumaneka ngemibala emininzi kwaye iya kukhazimla ngepolishi. Ukugcina imarble kuya kubaluleka, okubandakanya ukuthengisa kwakhona i-flooring ngamaxesha athile.
Isilayidi yenye yeendidi zekhitshi elingaphantsi kukhetho olukhetheke kakhulu kuba ufakelo olunye olunye lwahluke kakhulu. Oku kunye nezinye izinto kuyenza ibe sisiphelo esiphakamileyo, esifana nomgangatho weTraverine okhankanywe ngaphambili. Oku kuyonyusa kakhulu ixabiso xa ulibeka ekhayeni, ngelishwa, oku kuyakwenza ukuba ixabiso lezinto liphezulu, kodwa ungaliphinda xa ulithengisa ikhaya!
Ixabiso liyahambelana nomgangatho wemveliso nangona; Isileyiti siyamelana nokudyobha kunye nokonakala kwamanzi, nto leyo ebaluleke kakhulu ekhitshini. Ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa ikwaye yomelele kakhulu kwaye ayisiyi kuhlala ichip, ukukrwela okanye ukuqhekeka.
Ukuba isileyiti iyakhathalelwa yenye yezinto ezinokuhlala ubomi bonke. Xa ujonga nawuphi na umgangatho wamatye endalo ekhaya kuhlala kulungile ukucinga ngenkqubo yofakelo, kwaye kwimeko yelitye lendalo, lishiyeke kwiingcali ngenxa yobunzima kunye nokubekwa ngendlela entsonkothileyo. Kwakhona qaphela ukuba ngelixa iithayile lukhetho oluhle kakhulu kumgangatho omgangatho, inokuba okanye ingangabi lukhetho olufanelekileyo kuwe nakwindawo yakho.
Umgangatho wokhuni lolunye udidi lomgangatho oza kuzisa imvakalelo eyahlukileyo kwindawo kuneetayile esele kuxoxwe ngazo. I-Wood flooring inikezela ngumoya ofudumeleyo kwaye ibandakanya ukhetho olwahlukeneyo lokujonga kunye nezitayile. Olunye ukhetho lungezantsi kodwa yazi ukuba kudidi ngalunye nganye inolayini wayo wemibala kunye neepateni onokukhetha kuzo. Umgangatho wokhuni unovakalelo kwimeko emanzi enje ngezo zifunyanwa ekhitshini kwaye zinokufuna ingqwalaselo ekhawulezileyo nakuphi na ukuchitheka okanye ubumdaka. Unokufunda ngakumbi malunga Ukulunga kunye nokubi komgangatho okhuni ekhitshini Apha.
Ukongezwa kweklasikhi, okungaphelelwa lixesha nakweliphi na igumbi, umthi onzima uya kuba yinto ebonakalayo emakhaya. Kukho iindidi ezininzi ze iintlobo zomthi onzima iindidi (eziya kuthi zibonise umbala, iqhina kunye noburhabaxa beenkuni) onokukhetha kuzo.
I-Hardwood ihlala isetyenziswa kwisicwangciso esivulekileyo apho iya kuthi gabalala kuwo onke amanqanaba ukwenza ukubonakala okufanayo. Umgangatho wokhuni olunzima ulukhuni, ke ngoko ukuma ixesha elide kunokuba nzima, yiyo loo nto iiragi zihlala zisetyenziselwa ukuthambisa kancinci. Umthi onzima uhlala ixesha elide (kwanobomi bonke), ukuba ukhathalelwe ngokufanelekileyo. Lo mgangatho uthatha ulondolozo kwaye unokwenziwa ngesanti phantsi kwaye ucokiswe.
Ubunjineli boMgangatho oLukhuni obunobunjineli bunezinto ezininzi ezilungileyo kubandakanya ukuthandwa kwayo. Ukuzinza yenye yezinto eziphambili ezifunekayo kumgangatho wasekhitshini kunye ne-Injini yomthi oLukhuni oya kuyikhupha imali apho umlomo ukhona. Ayizukukwazi kuphela ukuthatha ukugcwala kwabantu kodwa iya kuba nakho ukumelana nophalazo oluya kukufumana ngandlela thile, imilo, okanye uhlobo.
Ngokwesiqhelo imigangatho yokhuni oluqinileyo ayisetyenziswanga ekhitshini ngenxa yokufuma kunye nobushushu obangela ukuba umthi onzima uhle kakhulu kubomi obude kunye nokuwonakalisa. Ngoku, ngomthi onzima onobunjineli, kukho ithuba lokuba ujongo olwahlukileyo ngelixa ugcina umgangatho ongagobanga.
Umqeshi, nangona kunjalo, uhlala ekhona. Ngenxa yokomelela okukhulu kunye nokuxhathisa okwenziweyo kwimveliso, ikwisiphelo esiphakamileyo xa kufikwa kumaxabiso, kodwa ufumana oko ukuhlawuleleyo. Kwezinye iimeko ukutyibilika kuya kuba ngumonakalo, kwaye kuyinkqubo yokuthinta ukubuyisela iplanga elinye ngokuchasene nomgangatho wonke. Ukongeza, njengendoda eyenziwe ngemveliso iqulethe ii-resins kunye nezinto zokuncamathela ezingaphantsi kokukhulu kwindalo esingqongileyo.
yimalini oyinika umtshato
Nangona uqalo ludla ngokubekwa kudidi ‘lomthi owenziwe ngomthi’ alunalo kwaukubakho ukhuni, yingca ecinezelweyo neyasetyenziswayo ukufumana umgangatho owubonayo namhlanje, ofana kakhulu nenkangeleko yomthi oluqinileyo. Inkqubo yokwenza ifayile nokwadala uqalo iya kuyinika imbonakalo enemigca, ihlala ibonisa 'amaqhina' apho iincam zidibana khona, oku kunika umlinganiswa, rhoqo njengakumthi oqhelekileyo banamaqhina.
Uqalo ngokwendalo lukhanya ngombala okuthetha ukuba ukutyibilika kuya kukhanya, kodwa ukuba unqwenela ukuba umphezulu ube mnyama unokwenziwa ngekhabhoni oya kwenza umhlaba uthambe kwaye ubemnyama. Ekuqaleni umntu uza kucinga ukuba i-bamboo yinto ezinzileyo kunye ne-eco, kwaye ngelixa ewe ikhula ngokukhawuleza kwaye ivuselela ngokukhawuleza, inokwenziwa kuphela phesheya kolwandle.
Oku akuyi kuthetha ukuba ayifuni kuphela ukuba loo nto ifuna ukuthunyelwa kwilizwe liphela, kodwa nenkqubo enokuthi iqhubeke ayihambelani nolawulo. Ukulwa noloyiko, ukukhangela iinkampani eziqinisekisiweyo liBhunga lamaGosa amaHlathi kuya kuqinisekisa iindlela ezikhuselekileyo zokuvelisa.
I-bamboo ineempawu ezintle ezininzi, ihlala ixesha elide kakhulu, inembonakalo yangoku, kulula ukuyicoca kwaye inokuhlaziywa. Ngelishwa ngazo zonke izinto ezilungileyo zikhona ii-cons. Umgangatho olungileyo we-bamboo uphezulu ngexabiso, kuba oku uya kuwubhatalela umgangatho, ukuba ayibizi mali qinisekisa ukuba umenzi uyahlonitshwa kwaye uyahlangabezana nazo zonke iimfuno zakho, kungenjalo ukuchitha iidola ezongezelelweyo kuya kuba kufanelekile ekuhambeni kwexesha. Enye into ekufuneka uyiqaphele kukuba uqalo luchaphazeleka kukonakaliswa kwamanzi kunye nokufuma, ekhitshini kubalulekile oku.
Kwakhona qaphela ukuba ngelixa iiplanga zeenkuni zikhethekileyo ekukhetheni umgangatho, zinokuthi okanye zingabi lukhetho olufanelekileyo kuwe nakwindawo yakho yekhitshi. Kukho ezinye iindlela ngaphandle kwethayile kunye neenkuni.
Ngelixa uzama ukubeka yonke into kumacandelo ngamanye amaxesha kukho abathengisi abasabalulekileyo ekuthethwa ngabo. Ukuba iinkuni okanye iithayile azibukeka okanye uzive kuwe zininzi izixa zomnye umgangatho onokukhetha kuwo. Ngamanye amaxesha ukukhetha ngaphandle kwebhokisi kuya kukhokelela kumgangatho owahlukileyo okhuthazayo oza kuthi kungekudala ube yinto enkulu elandelayo. Ezinye (kodwa hayi phantse zonke) zezinye iintlobo zomgangatho ezithandwa okanye eziqhelekileyo ezisetyenziswayo zezi zilandelayo.
I-Linoleum lukhetho olufanelekileyo lomgangatho xa ugcina imeko-bume engqondweni. Le nto yenziwe ngaphandle kwe-VOC's (Volatile Organic Compound), kwaye yenziwe ngezixhobo ezihlaziyekayo. Ayisiyiyo le kuphela Umgangatho we-eco friendly , kodwa ikwanakho nokuzinza okuhle, ukumelana nexabiso elifanelekileyo lokugcwala kweenyawo.
Ngenxa yokwakheka kwe-linoleum ivumela ukuba yenziwe kwiintlobo ezininzi zeepateni kunye nemibala, isenza kube lula ukuyibeka kuseto oluninzi, kwaye umbala uyiyo yonke le mveliso, hayi umaleko ophezulu kuphela. Ukongeza kuluhlu lwemibala kunye neepateni ivan nayo iza ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngamashiti, iithayile okanye izikwere, oku kunokwenza uyilo olunomdla noluphefumlelweyo ngaphandle kwesithintelo kakhulu. Ngelixa oku kuya kuba yinto enokumelana nokufuma, iya kubanakho ukungcoliswa kwaye inokukhuhla. Oku kunokulwa nokudibanisa.
I-Linoleum inokuba yinto engabizi kakhulu kumgangatho wexabiso lokuqonda. Ungabona ezinye izimvo ze Imigangatho yasekhitshini kuhlahlo-lwabiwo mali Apha.
Ngelixa i-vinyl flooring iludidi ngokwalo, siza kugxila kwi-vinyl yokunethezeka kunye ne-vinyl eyomeleleyo kuba ezo zezona zisetyenziswa kakhulu. IVinyl ibiza kakhulu, kodwa loo nto ayithethi ukuba ayongezi ixabiso kwikhaya (Kwakhona uyakufumana oko ukuhlawulayo). Ukusebenza njengeendleko njengoko kunjalo kunokhetho olungenamda!
Imibala, iipateni, imifanekiso, nantoni na onokucinga ngayo inokuprintwa kwi-vinyl, unokufumana into eya kujongeka njengelitye okanye ukhuni oluqinileyo (kwaye abantu benza njalo). IVinyl iyamelana kakhulu namanzi, kwaye kwezinye iimeko ubungqina bamanzi. Ukongeza, i-vinyl yomelele kakhulu, ukuba igcinwe kakuhle inokuhlala ukuya kuthi ga kwiminyaka engama-20, kwaye ukuyigcina akukho mzamo mkhulu ufunekayo.
Enye yezona zinto ziphambili kumgangatho we-vinyl kukuba ayisiyonto eco-friendly, enyanisweni iqulethe i-PVC kwaye ikhuphe iikhompawundi eziguqukayo, ezithi ukuba kukho umlilo, zikhuphe iikhemikhali eziyityhefu. Okwangoku, abavelisi basebenzela ukufumana isisombululo kule ngxaki, kwaye ezinye (iindlela ezibiza kakhulu) zibonelela ngePVC vinyl yasimahla eza kusetyenziswa kwiindawo ezininzi zentengiso.
ilokhwe yomtshato eneempawu ezibomvu
Xa ujonge i-flooring entle, eyahlukileyo ekulula ukuyicoca, ikhokho lukhetho olukhulu. Ikhorki yenye yezona ndawo zicocekileyo kwaye zizinzile ngaphandle. Ngokuchasene noninzi lomgangatho wethayile, ikhokho ithambile kakhulu ukuma nokuhamba.
Ezinye izinto ezibalulekileyo kumgangatho wekhitshi ukufuma kunye nokumelana nesiliphu. Zombini ezi zinto zibandakanyiwe xa kufikwa kumgangatho wokhokho. Ngelishwa ngenxa yokwakheka kwecork yinto ekufuneka ilungisiwe rhoqo emva kweminyaka emine. Kuba i-flooring ithambile ukuma kuyo inokubakho kwi-indents okanye yonakalise xa kuziwa kwifenitshala enzima, izixhobo zombane okanye ezinye izinto ezinkulu.
Ukuqwalaselwa ngononophelo kwemigangatho yokhokho kukuba zezona zibalaseleyo kwindawo ngaphandle kwelanga elininzi kakhulu, ngelishwa engaqhelekanga ekhitshini, kungenxa yokuba ukufumana ilanga elininzi kakhulu kuya kubangela ukuba i-cork flooring icace umbala, ngokungalinganiyo.
Isamente kunye nekhonkrithi zihlala zididekile. Isamente sisisixhobo sekhonkrithi yiyo loo nto kule meko siza kuba nomgangatho wekhonkrithi. Ngamanye amaxesha uyakuba nomgangatho wekhonkrithi othe nkqo, ngamanye amaxesha (ngeendleko ezingaphezulu ndingazongeza) ungazama iithayile zekhonkrithi.
Ikhonkrithi lulondolozo olusezantsi, imveliso ehlala ixesha elide. Kwakuqhelekile ukuba ukutyibilika kwekhonkrithi yayisisilayidi nje esingwevu esasisegaraji, kodwa ngoku kukho iindlela ezinokongeza umbala kunye noyilo olunokuluguqula lube ngumgangatho owahlukileyo ekhitshini, okanye ngenene nasiphi na isithuba onokucinga ngaso. Imigangatho ekhonkrithi inokukuvumela ukuba wongeze into YEMIGANGATHO EShushu, ewe ufundile ukuba kunjalo, imigangatho eshushu.
Ngelishwa nangona umgangatho wekhonkrithi uza kuba nzima kubantu abahamba kuwo kakhulu, ukuba isetyenziswa ekhitshini kuyacetyiswa ukuba ufumane ukhuko oludityanisiweyo lokuma kakhulu kwiindawo ezifana nesinki yokuthatha iinyawo nemilenze. Ukuqhekeka kuya kwenzeka ngomgangatho wekhonkrithi kuba sisitshixo esikhulu sezinto kwaye kuya kufuneka sandise kwaye sivumelane notshintsho kwindalo esingqongileyo.
Umgangatho we-epoxy ngumgangatho ofikelelekayo, oku kuya kuthetha ukuba ayisiyiyo intle, kodwa iya kulunga phantse kulo naluphi na uhlahlo-lwabiwo mali kwaye ineempawu ezithile zokuphumelela. Ngethamsanqa i-epoxy flooring iyamelana nayo nantoni na onokucinga ngayo: iblitshi, irhasi, izicoci, iioyile, iikhemikhali, iintsholongwane kunye neebhaktiriya. Kungenxa yesi sizathu le nto uhlobo lomgangatho lusetyenziswa kwiindawo ezifana neegaraji nezibhedlele.
Umtshato wesibini izipho zezimvo
Ukuqina kwe-epoxy nako kuyamangalisa; ikhonkrithi kuphela kwento eya kuhlala ixesha elide kune-epoxy flooring, ehamba phantsi kwe-epoxy nangayiphi na indlela. Umgangatho we-epoxy uya kuba ngathi ukongeza isikrweqe kwi-porcupine, okwenza ukuba kube nzima ukutshabalalisa. I-Epoxy iya kukhusela ifom nakuphi na ukufuma kunye namabala kwaye ayizukufuna naluphi na uhlobo lobushushu ukuba luphumele kulo.
I-Epoxy iya kuhlala iminyaka engamashumi ukuba ifakwe kakuhle kwaye ikhathalelwe. Ngelishwa ukutyibilika kwe-epoxy sisisombululo sethutyana; ukuqhekeka, ukusika kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla kuya kwenza ukuba i-flooring ifune enye ingubo ye-epoxy.
Inkqubo yokufaka i-epoxy ayimnandanga; ufakelo luza kudala umphunga owomeleleyo, lufuna ukulungiswa okunesithukuthezi, kufuneka lwenziwe ngokuchanekileyo, kwaye kubi nangakumbi ukususa ukuba kukho utshintsho kuyilo. Oku kuyakuthetha ukuba uyakufuna ukufakwa kobungcali ekuqaleni nokususwa emva kwexesha lokwenza utshintsho. Olu hlobo lophahla alunakwenza mpembelelo zininzi kwixabiso lokuthengiswa kwakhona kwekhaya!
Owona mgangatho uphezulu wekhitshi uya kwahluka kwiprojekthi nganye kwikhaya ngalinye. Ngokusekwe kuhlahlo-lwabiwo mali, iimfuno, imiqobo yamaxesha, iinkolelo, kunye nezitayile, omnye weemigangatho ekhankanyiweyo iya kuba yeyona ilungileyo kuwe! Zonke ezi zidwelisiweyo zikhuphisana kakhulu kwaye ziya kuba zilungele ukusetyenziswa kwindawo yasekhitshini, kodwa qiniseka ukuba ujonga i-cons edwelisiweyo kunye nazo naziphi na iindlela onokuthi usebenze ngazo kunye nokwenza i-flooring efanelekileyo.
Qaphela kwakhona ezinye iintlobo zaphantsi komhlaba, ukuba unazo zonke izinto ezenziwe ngomthi kuyo yonke indlu, kunokubonakala ngathi kububulumko ukunamathela kuloo nto kwaye uyithwale, okanye mhlawumbi ujonge utshintsho kunye nokwenza iziqholo! Nokuba uyintoni na ukuqiqa kwakho kuya kubakho ukhetho lomgangatho.
Umgangatho wethayile ngowona uthandwa kakhulu kwaye yenye yezona ndawo zintle zomgangatho wekhitshi. Ungatsho ukuba yeyona nto ibalaseleyo, kodwa ibambelele kakuhle kwindawo yasekhitshini ngelixa unika ubuhle, ukumema abantu abaninzi ukuba bakukhangele ekhitshini labo.
Amakhitshi adla ngokuba lelinye lamagumbi enziwe ngokutsha, kwaye bahlala benemali esetyenzisiweyo, kuba yindawo ofuna ukubonisa kuyo, indawo apho wonke umntu aqokelela khona. Oku kuyathethwa, nangona ukutyibilika kwethayile kukwicala elibiza kakhulu lezinto, kuyabhatala ekuhambeni kwexesha kwaye yenye yeentlobo ezilungileyo zekhitshi jikelele.
Ngoku ekubeni kugqityiwe (okanye ubuncinci kuncitshisiwe) iintlobo zekhitshi olifunayo phantsi, inyathelo elilandelayo liya kuba kukufumana phi! Xa ugoogle ‘apho unokuthenga khona i-flooring’ uya kuza nesigidi seentengiso.
Eyona ndawo onokuthi uqale kuyo iya kuba ziivenkile ezinkulu zokuphucula amakhaya, ngakumbi leyo unayo kufutshane nekhaya lakho. Oku kuyakuvumela ukuba ungene kwaye ufumane iisampulu zombala, okanye uthathe izinto zokugcina imali ekuhambiseni.
I-Lowes, iDepho yasekhaya, iMenards, njl. Zonke iindawo ezilungileyo ukuqala. Ukuba awuyifumani le nto uyikhangelayo apho ezinye iivenkile ezicetyiswayo zewebhu ezihlala zikhetheke ngakumbi ziya kuba ziiLumquidators okanye uMgangatho kunye neDecor. Ngokucacileyo i-Lumber Liquidators iya kuthengisa ikakhulu iimveliso zeenkuni, kwaye uMgangatho kunye neDecor ziya kugxila kumgangatho. IAmazon okanye iWayfair zikwathengisa kwi-Intanethi ezinokuthi zibonelele ngamaxabiso amaninzi kunye nokuthengisa.
Ukufumana ezinye izimvo ndwendwela ezinye iigalari zoyilo lwekhitshi.
Umama oqhelekileyo womyeni onxiba umtshato wangaphandle
Izimvo zesipho seminyaka eli-1
Ingoma yomyeni nomama